उनी भन्थिन् ‘म पुरुषबाट महिला बनेकी मोडल हुँ, नयाँ इतिहास रच्न चाहन्छु’ « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
उनी भन्थिन् ‘म पुरुषबाट महिला बनेकी मोडल हुँ, नयाँ इतिहास रच्न चाहन्छु’
एउटा अन्तरवार्तामा उनले भनेकी थिइन् ‘मेरो मुख्य लक्ष्य सुपर मोडल बन्ने हो । मोडलिङमा जुन उचाइ बनाउँदैछु, त्यसलाई सबैले स्वीकार गरे भने म अझै माथि जान्छु भन्ने लाग्छ ।’ साँच्चै आज अञ्जली लामा भारतकै सुप्रसिद्ध ल्याक्मे फेशन विक २०१७ मा टप फाइभमा पुग्न सफल भएकी छिन् ।
अञ्जली लामा नेपालकै पहिलो ट्रान्सजेण्डर मोडल हुन् । अग्लो कद, खिरिलो शरीर र सुन्दर अनुहार भएकी उनी पुरुषबाट महिला बनेकी हुन् भन्ने कुरा कमैलाई पत्यार लाग्छ । नेपालको मोडलिङको दुनियाँमा आफ्नो नाम बनाइसकेकी अञ्जलीको सपना सुपर मोडल बन्ने थियो । अहिले यही सपना साकार गर्दै उनी भारतको ल्याक्मे फेशन विकमा पुगेकी छिन् । उत्कृष्ट पाँचमा सेलेक्ट भइसकेकी छन् । तीनवटा राउण्डबाट सयौं जनालाई पछि पार्दै अञ्जली टप फाइभमा पुगेकी हुन् । ल्याक्मे फेशन विक त्यस्तो प्ल्याटफर्म हो जहाँबाट दीपिका पादुकोण र कट्रिना केफ जस्ता मोडलहरुले आफ्नो भविष्यको गोरेटो कोरेका थिए ।
नेपालमा हुँदा नै विभिन्न फेशन विक, ¥याम्प र विभिन्न पत्रिकाको कभरमा देखिइसकेकी उनीमाथि दुई वर्ष अघि अञ्जली भन्ने डकुमेन्ट्री पनि बनिसकेको छ । उनी आफ्नो सफलताको श्रेय नील हिरा समाजलाई दिन्छिन् ।
पढौं उनी कसरी एउटा केटाबाट केटी बनिन् । २०६४ सालको दसैंमा नवीन लामा नुवाकोटको दुगर्म गाउँ काउलेबाट काठमाडौं झर्दैथिए । पातलो ज्यानका नवीन मनभरि पीडा र अनिश्चित भविष्य बोकेर घरबाट हिँडेका थिए । काठमाडौंमा उनको कुनै सहारा थिएन । बुवाले टीका लगाउँदा चाँडै बुहारी भित्र्याउनु भनेर आशीर्वाद दिएका थिए । उनी त्यसो गर्न सक्दैनथे भने खास कुरा बताउन पनि असमर्थ थिए ।
दुई वर्षपछि उनी घर फर्किए । फर्कंदा उनी पहिलेजस्तो सर्ट-पाइन्टमा थिएनन्, कुर्ता-सलवारमा थिए । उनको नाम परिवर्तन भैसकेको थियो । नाम र शरीरसमेत परिवर्तन भएको उक्त दृश्य गाउँलेहरूका लागि अपत्यारिलो र अविश्वसनीय मात्र थिएन, आपत्तिजनक पनि थियो । कतिसम्म भने उनका बुवाले घरमा आएकी युवती नवीन नै हुन कि होइनन् भनेर चियोसमेत गर्नुपरेको थियो । दुई वर्षअघि नवीनको पातलो ज्यानमा उन्नत वक्ष पलाएका थिए । ब्यागमा सौन्दर्य प्रसाधनहरू थिए । सोचविचार सबै परिवर्तन भएका थिए । ‘अचम्मै भयो, कलियुग प्रस्टै देखियो ।’ आत्तिएका बुवाले गाउँलेहरूका बीच भनेका थिए, ‘मेरो छोरो सग्लै काठमाडौं गएको थियो, फकर्ंदा छोरी पो भएछ । काठमाडौंले मेरो छोरो निल्यो, छोरी बनाएर पठायो ।’
त्यति बेला पनि काठमाडौंमा संविधानसभाको तातो बहस चलिरहेको थियो । यस्तो वातावरणमा १९ वर्षीय नवीन अञ्जलीमा परिवर्तन भैरहेका थिए । चुपचाप एउटा क्रान्ति भैसकेको थियो ।
खासमा अञ्जली लामा एउटी मोडल हुन् । ५ फिट ८ इन्च अग्लो तर खिरिलो उनको ज्यानमा दर्जनौं फेसन डिजाइनरका पहिरन सजिएका छन् । उनी केही म्युजिक भिडियोमा समेत नाचिसकेकी छिन् । यत्ति मात्र उनको सपना होइन, अञ्जली अझ माथि जान चाहन्छिन् । ‘म सुपर मोडल बन्न चाहन्छु । नयाँ इतिहास रच्न चाहन्छु ।’ अञ्जलीले भनिन्, ‘म नेपालको पहिले ट्रान्सजेन्डर मोडल हुँ । यो तथ्यलाई अझै विस्तार गरेर विदेशसम्म पुर्‍याउन चाहन्छु ।’
अञ्जली जन्मदा उनकी आमा नराम्रोसँग रोएकी थिइन् । तामाङ समुदायमा छोरी जन्मदा ठूलो खुसीयाली मनाइन्छ । छोरी जन्मनु लच्छिन मात्र होइन, पैसाको आगमन हुन्छ भन्ने विश्वास छ । उनकी आमालाई पनि उक्त कुरामा विश्वास थियो । यसअघि उनले छोरीको कामना गर्दागर्दै ४ छोरा जन्माइसकेकी थिइन् । जतिपटक अब छोरी जन्मन्छे भन्ने विश्वासमा गर्भधारण गर्थिन्, जन्मपछि उनी छोरी नजन्मिएकोमा रुन्थिन् । अञ्जली जन्मदा उनले धेरै भाकल गरेकी थिइन्, छिमेकीसँग यही विषयमा बाजीसमेत परेको थियो, तर जन्मदा अञ्जली पनि छोरै भएर जन्मिइन् ।
शरीरमा छोराको अंग भए पनि उनको स्वभाव छोरीकै जस्तो थियो । उनी आमालाई घरधन्धामा सघाउँथिन् । ठूलो हुँदै गएपछि बुवाले उनलाई हलो जोत्न पठाउँथे, उनी भागेर घरभित्र छिर्थिन् । ‘हलो जोत्न आँट नै नआउने, भागौं-भागौं लाग्थ्यो,’ नारी स्वभावको प्रारम्भिक कुरा सम्झँदै अञ्जली भन्छिन्, ‘म कसरी गरी खान्छु होला भनेर चिन्ता लाग्थ्यो । त्यसमाथि तैंले कसरी स्वास्नी पाल्छस् भनेर बुवाले गाली गर्दा यो संसार मेरा लागि होइन भन्ने लाग्थ्यो ।’ गाउँले साथीहरूले उनलाई तेरो स्वभाव त छोरीको जस्तै छ भनेर जिस्क्याउँथे । छोरीजस्तो भन्दा उनलाई भने खुसी लाग्थ्यो ।
यस्तै द्वन्द्वमा उनले गाउँबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरिन् । पढ्न काठमाडौं आएपछि पो थाहा भयो, उनी पुरुष शरीरमा महिलाझैं व्यवहार गर्दा रहेछन् । उनको बोली, हिँडाइ, व्यवहार जे देख्दा पनि मानिसहरू हाँस्थे । आफूले काम गर्ने होटलमा उनलाई विभिन्न किसिमका शब्दले हियाउँथे भने कलेजमा उनी केटासँग बस्ने कि केटीसँग बस्ने अलमलमा पर्थे । अरू साथीभाइ केटीलाई चिठी पठाउँथे, उनी भने आफूसँगै बस्ने केटालाई मन पराउँथिन् ।
‘मलाई के भएको हो, छुट्याउनै सकिनँ । कहिलेकाहीँ त म पागलजस्तै हुन्थें ।’ नवीन हुँदाताकाको घटना सम्झँदै अञ्जली भन्छिन्, ‘अरू केटीसँग डेटिङ गएको कुरा गर्थे, म भने कसैले माया गरेर घुमाएको कल्पना गर्थें ।’
पशुपति क्याम्पसमा आईए सकेर बसेका बेलाको एक साँझ उनले दुई-तीन युवकले महिलाको पहिरन लगाएर हिँडिरहेको देखे । उनलाई अचम्म लाग्यो । सोध्दा थाहा भयो, उनीहरू पनि जन्मले पुरुष तर व्यवहारले महिला रहेछन् । उनीहरूको समूह पनि छ र त्यसलाई एउटा संस्थाले सहयोग गर्छ भन्ने जानकारी पनि उनले पाइन् । उनीहरूले ब्लु डाइमन्ड सोसाइटीमा भेट्ने समय पनि दिए । ‘त्यो दिन जीवनले अर्कै मोड लियो । मैले पनि इच्छाअनुसारको जीवन बाँच्छु भनेर संकल्प गरें ।’
त्यसयता उनी बदलिएकी छिन् । आईएको परीक्षा दिँदासम्म उनी पुरुष थिइन्, त्यसपछि महिला हुने दृढ संकल्प लिइन् । दुई वर्षपछि घर जाँदा उनी साँच्चैकी युवती भएर फर्किन् । गाउँलेहरूका लागि उनी कथा बनिन् । दस गाउँका मानिस उनलाई हेर्न आए । उनको छातीमा बाक्लो फोम भएको ब्रा थियो । पाइन्ट-सर्ट होइन, शरीरमा कुर्ता-सलावर सजिएको थियो । केश बढेर गर्धनसम्म आएको थियो ।
‘रातदिन काम गरेर ४ हजार डलर जम्मा गरी थाइल्यान्ड गएँ । त्यहाँ मैले कृत्रिम स्तन राखें ।’ शरीर परिवर्तनको रहस्य खोल्दै अञ्जली भन्छिन्, ‘हुन त स्त्रैण हार्मोनहरू खाएर आफूलाई परिवर्तन त गरेकी थिएँ तर कृत्रिम स्तन राखेपछि भने आफूलाई पूर्ण महिला मान्न थालेकी छु ।’
झट्ट हेर्दा उनी कुनै बेला पुरुष थिइन् भनेर पत्याउन मुस्किल पर्छ । ल्याक्मे फेशन विकको फाइनल राउण्ड फेब्रुअरी १ देखि ५ सम्म हुँदैछ । उनलाई हाम्रो शुभकामना !
१ पुस २०७३, साप्ताहिकको सहयोगमा, ३।३०
काठमाडौँ । कर्मचारी सञ्चय कोषले संस्थागत रुपमा काम नगर्नेलाई समेत व्यक्तिगत रुपमा कोष कट्टीको सुविधा
युएस बंगला विमान दुर्घटना, जाचँबुझ आयोगद्वारा काम शुरु : यस्तो आयो प्रारम्भिक रिपोर्ट
काठमाडौँ । युएस बंगला विमान दुर्घटना सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित जाचँबुझ आयोगले आजदेखि आफ्नो काम
काठमाडौंमा ‘शाकाहारी मासु, भटमासको दुधदही !’
काठमाडौं– अनौठो सुनिन्छ, शाकाहारी मासु ! यसै साता काठमाडौंको नेपाल पुलिस क्लबमा आयोजित एशिया प्रशान्त